२०७८ मङ्सिर १३ सोमबार
ट्याक्टर दुर्घटनामा दुईको मृत्यु, एक घाइते
यी हुन् नेपाली कांग्रेसका ५१ जिल्लाका निर्वाचित सभापति ? (सूचीसहित )
बागमतीमा ‘भुगोल’बाट एक्लो उम्मेदवार बन्दै सुदर्शन
को हुन् एमालेको महासचिव पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका पोखरेल ?
एमाले महाधिवेशन लम्बियो, खाना खर्च कसले ब्यहोर्छ ?
आइएमई ‘डबलको डबलको डबल’ अफर : बम्पर विजेतालाई अध्यक्ष ढकालद्धारा चेक हस्तान्तरण
ओलीसँग रिसाएका लालबाबु पण्डित काठमाडौं आइपुगे..
एमाले महाधिवेसनः प्रभु साह केन्द्रिय सदस्यमा निर्बिरोध, प्रदेश–२ का सबै ९ बिजयी हुने
उषाकलासहित ३ महिला प्रदेश १ वाट केन्द्रिय सदस्यमा निर्बिरोध
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउँदा बढाउँछ यी रोगहरू - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल चलाउँदा बढाउँछ यी रोगहरू
आइतबार, जेठ ३२ २०७७
अहिलेको समयमा मोबाइल फोन हाम्रो जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। हरेक समय हामी फोन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं।
मोबाइलसँग यति जोडिएका छौं, राति सुत्नु अघिसम्म मोबाइल स्क्रिनमै हराउने हामी बिहान उठ्नासाथै फोन मात्र देख्छौं। ब्युँझने बित्तिकै फोन चलाउने हाम्रो बानी भइसकेको छ। तर अध्ययनहरुले यसरी बिहान उठ्नासाथ मोबाइल चलाउँदा विभिन्न प्रकारका असर निम्तन सक्ने देखाएका छन्।
पछिल्लो समय बेलायतमा करीब दुई हजार व्यक्तिमा गरिएको सर्वेक्षणबाट बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुको दिनको शुरुआत तनावबाट हुने पाइएको छ। जसका कारण उनीहरुलाई आफ्नो नियमित काम गर्न असहज हुन्छ।
विज्ञहरुका अनुसार, उठ्ने बित्तिकै जब हामी मोबाइलको नोटिफिकेशन देख्छौं, मस्तिष्कले त्यही विषयमा सोच्न थाल्छ। जसको कारण हाम्रो ध्यान दोस्रो काममा जाँदैन। त्यसले हाम्रो कार्यक्षमतामा असर पुर्‍याउँछ।
बिहान उठ्नासाथ जब हामी कुनै विषयमा सोच्छौं, लगातार त्यसबारे सोच्दा हामीलाई तनाव र व्याकुलता हुन थाल्छ। बिहान कतिपय व्यक्तिको रक्तचाप बढेको अवस्थामा हुन्छ, यस्तोमा धेरै तनाव लिंदा रक्तचाप थप बढ्न सक्छ। जसका कारण विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
बिहान मोबाइल चलाउँदा हामी सामान्यतया इमेल वा सोसल मिडियाको नोटिफिकेशनमै आँखा लगाइरहेका हुन्छौं, त्यस क्रममा हामी बितेका समयका कुरा पढिरहेका हुन्छौं। हामी आफ्नो वर्तमान बिर्सेर अतीतमा हराउन थाल्छौं। जसले गर्दा तपाईंको दिनको शुरुआत राम्रो हुँदैन।
विज्ञहरु बिहान उठे लगत्तै मोबाइल फोन नचलाउन सुझाव दिन्छन्। तपाईं दिनको शुरुआत योग वा ध्यानबाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले मन र मस्तिष्कमा शान्ति र ऊर्जा भर्छ र तपाईं आफ्नो दैनिक काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्नुहुन्छ।
आँखा र दिमागमा असर
मोबाइलबाट निस्किने किरणलाई लामो समय हेर्दा आँखाको दृश्यशक्तिलाई कमजोर पार्दै लान्छ । मोबाइलको किरण प्रत्यक्ष्य रूपमा आँखामा पर्ने हुनाले यसको असर टिभीको स्क्रिनको तुलनामा अझै कडा हुन्छ । ज्यादा मोबाइल प्रयोग गर्नाले आँखा र टाउको दुख्ने, गर्दन दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने जस्ता समस्या निम्तिन सक्छन् । जुन यसले दिमागमा पार्ने असरको कारण बन्न सक्छ ।
तनाव र चिन्ता
चिन्ता विना शान्तिपूर्वक आफ्नो दिनचर्या सुरु गर्नु उत्तम हुन्छ । यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइललाई आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ भने फोनकल, म्यासेज, इमेल, रिमाइन्डर, सोसल मिडिया इत्यादिले भरिएको हुन्छ जसले चिन्ता र तनाव निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाईं निद्राबाट ब्युँझ्ने बित्तिकै सोसल मिडिया हेर्न सुरु गर्नुभयो भने, दिमाग यसमा गाँसिएको हुन्छ र अनावश्यक जानकारीले भरिन्छ । तनाव र चिन्ताको साथ दिनको सुरुवात स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ ।
र यो पनि पढ्नुहोस् : जानिराखौं मोबाइललाई चार्ज गर्दा गर्नै नहुने काम
यदि तपाईंले बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल फोन हेर्ने गर्नुभयो भने, तपाईंले नचाहँदा नचाहँदै पनि चिढचिढापन आइ नै हाल्छ । बिहानको तालिकाको सुरुवात मोबाइलमा प्राकृतिक रूपमा आफसेआफ परिवर्तन हुनसक्छ । यसको कारण यो हो बिहान उठेपछि मोबाइलमा केही त्यस्ता प्रकृतिका समाचार, फोटो, कार्टुन, चित्र देख्नुभयो जुन नकारात्मक छ, यसले सीधा मस्तिष्कलाई असर गर्छ । रिस उठ्ने, तनाव हुने, अनियन्त्रित हुने लगायतका कुरा यसको कारणले पैदा हुनसक्छ ।
बिहान सबभन्दा पहिले मोबाइल हेर्दा नकारात्मक सूचना देखेपछि दिमागले उही विषयको बारेमा सोच्न थाल्छ । यसले अन्य कामलाई ध्यानमा राख्दैन र सिधै कार्यक्षमतामा असर पुर्‍याउँछ ।
सुत्ने समयमा मोबाइल हेर्नु र उठ्ने बित्तिकै मोबाइल नै प्रयोग गर्दा अवस्था झन खराब हुनसक्छ । यसरी नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने मानिसहरू डिप्रेसनबाट ग्रस्त हुन सक्छन् । बिहान उठ्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न किसिमका समाचारहरू पढेर र हेरेर मानिस दिक्दारीमा फस्छ । अरूको जीवनशैली देखेर तिनीहरू निराश हुन्छन् र आफैंलाई तुलना गर्न थाल्छन् जसले प्रयोगकर्तामा डिप्रेसन निम्त्याउन सक्छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: आइतबार, जेठ ३२ २०७७ २१:१९:१९
उइगरहरुमाथिको चिनियाँ दमन सीमा बाहिर पनि फैलियो : प्रतिवेदन
उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पताले बन्धक बनाएपछि तीन तलावाट हाम फालेका मण्डलको निधन
कांग्रेसको प्रारम्भिक परिणाम : देउवा ३५ प्रतिशतमा खुम्चिए, पौडेल पक्षको ६० प्रतिशत
५६ वर्षमा लागे ‘रोमान्स किङ’ खान
सारेगमपमा झापाली ‘धमाका’
फुलन्देको आमाको कारणले गर्दा ‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ बन्द !
रञ्जु दर्शना र आलोक सुवेदीद्वारा संयुक्त दागबत्ती
को-को परे ३०१ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा [नामसहित]
३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटीको सूचीमा नपरेपछि रुष्ट हुँदै बाहिरिए दुर्गा प्रसाईँ
अन्धविश्वासबाट माथि उठेर छोरीलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर !
यस्तो छ दर्ता हुन नसकेको भीम रावलको मनोनयन पत्र, प्रस्तावक र समर्थक को ?
ओलीले पढेर सुनाए ३०१ जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम
सरकारले देशका सबै नागरिकलाई पुग्ने गरी खोपको व्यवस्था गरिसक्‍यो : खतिवडा
मलेसियाविरुद्ध जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा पुग्ने नेपालको लक्ष्य
घट्ने भयो मोबाइल कलको शुल्क, १० पैसामा कुरा गर्न सकिने
धवलागिरि अस्पतालमा पहिलोपटक पाठेघरको शल्यक्रिया
आज विश्व मधुमेह दिवस : विलासी जीवनशैलीले बढ्दै मधुमेहका राेगी
माधव नेपालको रक्सी–बियर नखाऊ भन्ने अभिव्यक्तिले उब्जाएका प्रश्न
कात्तिक ३० २०७८
जुम्लाका किसानहरू भन्छन् : सरकार सेतो चामल नदेऊ यहाँको मार्सी धान फल्ने खेत बनाइदेऊ
कात्तिक २९ २०७८
महिलाले अधिकारको ‘दुरुपयोग’ गर्दा पुरुष जोखिमपूर्ण मानवप्रजाति बन्ने खतरा !
कात्तिक २३ २०७८
यातायातमन्त्री ज्यू जनताहरूलाई कहिलेसम्म ट्याक्सी व्यवसायीको सिकार बनाइरहने ?
३०१ भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेपछि सार्वजनिक गरिएन उम्मेदवारको नाम
चोरीको मोटरसाइकल १५ हजारमा बेच्दै गर्दा चोर पक्राउ
२८ बर्षिया बेलवासे लोकप्रिय मतसहित कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित
महिला हिंसाको अर्को रूप : प्रेमीका लागि आफ्नो जन्मघर त्यागेका महिलामाथि नै हिंसा ! #16Days
पोस्टमार्टम गर्न लागेका व्यक्तिले हातखुट्टा चलाउन थालेपछि…